သုတေသနအဖွဲ့အစည်း | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
တဦးတည်းအပိုင်း non-သုတေသီများမှဖွင့်လှစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ, သုတေသနစိတ်ဝင်စားနေသောနည်းပြသော်လည်းလက်ရှိလုပ်နေကြသည်မဟုတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းကတဆင့်လွန်ခဲ့သည့်တရားဝင်, ပညာရေးသုတေသနပြုကြပြီမဟုတ်သူ။ အဆိုပါနည်းပြသုတေသနအဖွဲ့အစည်း၏ဤအပိုငျးမှ Access ကိုပုIAC®အဖွဲ့ဝင်များဧရိယာကနေတဆင့်ရရှိခဲ့နိုင်ပါသည်။
အခြားအပိုင်းသာသုတေသီများနည်းပြအလုပ်ကိုမှဖွင့်လှစ်သည်။ အကြောင်း, လက်ရှိအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းကတဆင့်တရားဝင်, ပညာရေးသုတေသနပို့ချနေသောသို့မဟုတ်အတိတ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနပြီးစီးကြသူသုတေသီများသည်။ အဆိုပါနည်းပြသုတေသနအဖွဲ့အစည်း၏ဤအပိုငျးကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ အောက်က form မှာဖြည့်ဆည်းခြင်းအားဖြင့်, သင့်ရဲ့သုတေသနအတှေ့အကွုံ / အရည်အချင်းများအဆိုပါIAC®သုတေသနအဖွဲ့နှင့် access ကိုအသေးစိတျ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးတို့ကအကဲဖြတ်ကြလိမ့်မည်အတည်ပြုကြသည်သောသူတို့အားမေးလ်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါနည်းပြသုတေသီများအပိုင်းအားလုံးနည်းပြအလုပ်ကိုသုတေသီများမှဖွင့်လှစ်သည်။ သငျသညျအတည်ပြုခံရဖို့တစ်ခုIAC®အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခွင့်ပြုချက်ကိုအောက်တွင်နှင့်အပေါ်သို့ form မှာဖြည့်ပါ, သင်နည်းပြသုတေသနအဖွဲ့အစည်းမှအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်အသေးစိတ်ကိုနှင့်အတူအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။
စိတ်မကောင်းပါ, ဤလျှောက်လွှာကိုသာသုတေသနအတွေ့အကြုံနှင့်အတူနည်းပြများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ရနိုင်သည်အခြားနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှု စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများကိုစာမျက်နှာ။
ဖြစ်ခဲ့သည် / ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဘာလဲ?*
ဘယ်သုတေသနနည်းစနစ် / ies သင်အသုံးပြုခဲ့ဘူးသို့မဟုတ်သင်အသုံးပြုစီစဉ်ထားသလဲ?*
ဖြစ်ခဲ့သည် / သင့်သုတေသနခေါင်းစဉ်ကဘာလဲ?*
အဘယ်ကြောင့်သင်နည်းပြသုတေသနအသိုင်းအဝိုင်း join ဖို့လိုသလဲ*
[prev-နောက်ခလုတ်ကို prev-url = "https://certifiedcoach.org/certification-and-development/coaching-research/research-based-coaching-mastery/" လာမယ့်-url = "https://certifiedcoach.org / လက်မှတ်-and ဖှံ့ဖွိုးတိုး / စီးပွားရေးလုပ်ငန်း-tools တွေကို-and အရင်းအမြစ်များကို "prev-ခေါင်းစဉ် =" သုတေသန-အခြေပြု Mastery "လာမယ့်-ခေါင်းစဉ် =" စီးပွားရေး Tools များနှင့်အရင်းအမြစ်များ "]